Android အတွက် Icing On The Cake APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အဆိုပါကိတ်မုန့်တွင်အေးခဲခြင်း
အဆိုပါကိတ်မုန့် APK တွင် Icing
ငါ Peel Good ကိုပြုလုပ်သူများအနေဖြင့် Cake on Icing သည်သင်၏နောက်ထပ်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်အလှဆင်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဖို့! သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် Icing တွင်ထည့်။ ဖြေပါ။ သငျသညျကိုလှည့်ရန်, ပိုက်, အလှဆင်နှင့်ချောမွေ့ရန်ဤမျှလောက်များစွာသောပျော်စရာ pastries? သင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကိတ်မုန့်ကိုလုပ်ပေးနိုင်မလား? ပျော်စရာကောင်းပြီးကောက်ယူရန်လွယ်ကူသော်လည်းအစက်အပြောက်တစ်ခုမလွတ်လာပါ။ သင်သည်ထိုအရာအားလုံးကိုပြီးမြောက်အောင်ပထမဆုံးပြုလုပ်နိုင်မလား။
စုံလင်သောမင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်မွေးနေ့ကိတ်ကိုအရောင်နှင့်အလှဆင်။ အရသာရှိတဲ့အဆုံးရလဒ်တွေကမင်းကိုပိုပြီးဆာငတ်နေစေမှာပါ။ ဘယ်အချိန်မဆိုကိတ်မုန့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီမှာအရှိဆုံးလက်တွေ့ကျကျအစားအစာခြင်း simulation ဂိမ်းရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ဆန်သောကိတ်မုန့်များကသင့်ကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်စေလိမ့်မည်။
ရေခဲပြီးချောချောမွေ့မွေ့အတွက်ကိတ်မုန့်များစွာ။ သင်ကိတ်မုန့်အားလုံးအပေါ် icing ထားနိုင်ပါသလား?
ကစားပါ၊ အနားယူပါ၊ သင်ရေခဲမုန့်တိုင်းကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။ icing နှင့်ပြန့်ပွား၏လက်တွေ့ကျကျခံစားရတယ်။
သင် icing ကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ချောချောမွေ့စွာဖြစ်စေ၊ လည်ချင်သလိုဖြစ်စေအရောင်ချင်သည်ဖြစ်စေ Cake on Iake သည်သင့်ကိုထိုနေရာတွင်ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ဤသည်ရှိအကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးဇင်ကိတ်မုန့်ခြင်း simulation ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေကိတ်မုန့်ပေါ်တွင် Icing ချခြင်း။
78.40 ကို MB